I-Casa La Esencia Loft (amakhilomitha angu-17 ukusuka e-Ainsa) - I-Airbnb
I-Casa La Esencia Loft (amakhilomitha angu-17 ukusuka e-Ainsa)
Aínsa, Aragón, i-Spain
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Raquel
I-Loft enkulu ye-28 m2 kanye nethala layo eliyimfihlo le-15 m2 elitholakala enhliziyweni ye-Aragonese Pyrenees ngaphansi kwemithambeka yePeña Montañesa kanye nemizuzu engama-20 ukusuka edolobheni lasendulo lase-Aínsa.
Isitudiyo sokuklama esihlanganisa izindonga zamatshe nemininingwane yezakhiwo ngokuqedwa kwekhwalithi engcono kakhulu, siyindawo eyingqayizivele enomqondo wokuhlala okuhlakaniphile, okunethezekile, kwesimanje kanye nokunethezeka lapho ukunyakaza kugeleza khona.
Isevisi ye-BBQ ngaphandle
I-Loft emangalisayo ye-20 m2 kanye nethala layo eliyimfihlo le-15 m2 eliseSan Lorien, enhliziyweni ye-Aragonese Pyrenees ngaphansi kwemithambeka yePeña Montañesa kanye nemizuzu engama-20 ukusuka edolobheni lasendulo lase-Aínsa.
Izikhala ezinesethi efundwayo yevolumu nokuphakama, okwenza ukukhanya kwekamelo kube kuhle, zihlukaniswe phakathi kwekhishi elinomqondo ovulekile ogcwele ngokugcwele elihlangana negumbi lokudlela, igumbi lokuhlala, igumbi lokugezela kanye nethala layo elihle.
Ucingo, WhatsApp, i-imeyili
Hlola ezinye izinketho ezise- Aínsa namaphethelo